VidtoMP3, kala soo bixi muusikada youtube bilaash | War gadget
Ma ogtahay VidToMP3? Mararka qaar la imaanshaha heesta ma sahlana. Waxaa jira meelo badan oo laga helo oo laga soo dejiyo muusikada, laakiin maxaad ugu raadineysaa qaabab kala duwan haddii ay hubaal tahay inuu YouTube ka jiro? Tan waa la cadeeyay, runtiina, Google waxay soo bandhigtay barnaamijkeeda baahinta muusikada ee YouTube-ka u gaarka ah. Hadda: Sideen uga dejisanaa muusikada fiidiyoow bogga ugu caansan ee noocan ah? Waa hagaag waxaa jira siyaabo badan, qaar iyaga ka mid ah oo aan macquul aheyn.
Hadday tahay waxaan rabno muusikada kala soo bixi youtube Ikhtiyaarro badan, waxaa habboon in lagu soo dejiyo kombuyuutarkeena codsi si gaar ah loogu talagalay taas. Laakiin haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan soo dejino codka fiidiyowga marar badan, waxaa laga yaabaa inaan xiiseyno habka ugu horreeya ee aan hoosta ku faahfaahin doono. Waa hab fudud oo aan u baahnayn wax rakibid barnaamij ah oo ay fududahay in la xusuusto. Markaad isku daydo, waxaad arki doontaa inaad u haysatid ikhtiyaarka aad doorbideyso.
1 Ku darida "ss" "youtube" hortiisa
2 Iyadoo VidToMP3
3 Iyadoo Jdownloader
4 Oo leh aTube Qabashada
Ku darida "ss" "youtube" hortiisa
Waa tan ugu fudud. Markii aan aragno fiidiyow aan dooneyno inaan soo dejino ama, waxa uu maqaalkani ku saabsan yahay, waxaan dooneynaa inaan kala soo baxno maqalkiisa, waxa ugu fiican ayaa ah kudar xarfaha "ss" "YouTube" hortiisa (labadaba xigashooyin la'aan) oo ku dhufo furaha gala. Tani waxay noo geyn doontaa sida bogga aad ku leedahay shaashadda hore oo aan ku soo dejisan karno fiidiyowga qaabab kala duwan iyo sidoo kale MP4 Audio. Ku soo dejiso 128kbps, oo ah tayo maqal ah oo kugu filnaan karta haddii aadan aad u nadiifin. Xidhiidhku waa inuu u ekaadaa sidan: https: // www.ssyoutube.com/watch?v=3rFoGVkZ29w
Si aad uga soo degsato degelkan, kaliya waa inaad gujisaa leebka midig ee badhanka cagaaran ee oranaya "soo dejiso", guji "More" oo dooro ikhtiyaarka aad rabto.
Sida looga soo saaro codka maqalka fiidiyowga YouTube adiga oo aan adeegsan wax barnaamij ah iyo qaab fudud
Ku dhowaad sida ugu fudud ee habka hore waa in la aado Bogga VidToMP3 oo samee wax badan ama ka yar. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah, halkii aan ka gali lahayn waraaqaha oo aan toos u aadi lahayn webka, waa inaan u tagnaa bogga gacanteena sidii aan u heli lahayn bog kale oo webka ah. Waxaan kaliya u baahanahay inaan tagno webka ka hooseeya xariiqyadan oo aan sameyno waxyaabaha soo socda:
Ku dhaji URL-ka fiidiyowga ku jira sanduuqa.
Guji "Download«. Kadibna waxay bilaabi doontaa inay muujiso boqolkiiba, qalabku wuxuu soo saarayaa codka oo wuxuu diyaarinayaa feylka si loo soo dejiyo, markii boqolkiiba la dhammeeyo waxay kugu wargelin doontaa in beddelaad la dhammaystiray
Daaqada xigta waxaan gujinay «Halkan guji si aad uhesho xiriiriyeha soo dejintaada«.
Kadibna calaamadee sanduuqa oo waxaan gujineynaa «Download MP3«. Fudud, sax?
Nidaam kale oo ka shaqeeya nidaam kasta oo ku shaqeeya (Windows, Mac iyo Linux) ayaa la socda Jdownloader. Xaqiiqdii waad taqaan isaga laakiin, haddiiba ay dhacdo, waxaan xasuusinayaa xusuustaada xoogaa. Jdownloader waxaa loo isticmaalaa in lagu soo dejiyo ficil ahaan feyl kasta oo laga helo bog kasta. Xiriirinta YouTube, kaliya Jdownloader ha furnaato waqtiga koobiyeynta xiriiriyeyaashaas ilaa boodhadhka si toos ah ayaa loogu guuriyaa Jdownloader. Markaad nuqul ka sameysid Jdownloader, waxaan labaad ku riixeynaa feylka aan dooneyno inaan soo dejino oo aan doorano «Add and start download». Waxay noo soo dejisan doontaa galka aan ka soo xulanay xulashooyinka Jdownloader.
Maskaxda ku hay inaanu riixi karno astaamaha lagu daray (+) si aan u aragno faylasha kala duwan ee aan soo dejisan karno. Xaalada fiidiyowyada, waxaan kala soo bixi karnaa fiidiyow, maqal iyo sawirro qaarkood. Xaaladdan oo kale, waxaannu dooran doonnaa codka.
Oo leh aTube Qabashada
ATube Catcher waa, inbadan, codsigii ugu dhameystiranaa ee laga soo dejisto waxyaabaha ka kooban YouTube. Marka lagu daro waxa xiisaha noo leh maqaalkan, oo soo dejinaya muusikada, waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan wax dhoofino faylasha qaab kale, taas oo ka dhigaysa aTube Qabashada qalab aad u fara badan. Si aad uga soo degsato muusikada YouTube-ka aTube Catcher, waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan dhejineynaa iskuxirka sanduuqa wada hadalka.
Waxaan muujineynaa astaanta wax soo saar.
Waxaan gujineynaa «download«. Sida aad u aragto, waxay na siin doontaa xulashooyin mug leh oo ikhtiyaarro ah halkaasna waa inaan dooranaa mid ka mid ah bandhigyada codka.
Nota: aTube Qabashada, sida qalab kale oo badan, waa codsi bilaash ah, laakiin waxay u baahan tahay inay noqoto mid faa iido leh. Si tan loo sameeyo, ku rakib aalad biraawsarkaaga internetka haddii aadan fiiro gaar ah u lahayn ogeysiisyada rakibidda. Waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad diido dalabyada noocan ah, kuwaas oo ku jira aTube Catcher waa laba (ama laba ayaan helayaa). Windows-ka markasta waa inaad ka taxaddartaa tan.
Ma fududaan karto ku raaxayso codka cajaladahaaga lagu doorbiday qalabkan aan ka soo hadalnay, marka lagu daro feylka aan soo dejisanayno wuxuu ku imaan doonaa qaab .mp3, ama la mid ah, ku habboon tan iyo markii ay qaadaneyso meel yar, waxaa soo saari doona aaladaha ugu badan, tayada maqalkuna waxay ku jirtaa gudaha heerarka.
Hadaad rabto inaad ogaato habab badan si soo dejiso fiidiyowyo youtube dheer iyo music jecel, ha moogaanin our hage si aad u soo dejiso fiidiyowyada youtube qalab kasta.
Qaab noocee ah ayaad ugala soo bixi kartaa fiidiyowyada ama muusikada YouTube-ka adigu doorbideysaa? Sababtoo ah kala duwanaanshaheeda iyo sababtoo ah waxay ku shaqeyneysay dhibaato la'aan dhowr sano, VidtoMP3 waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida Loogu Soo Degsado Muusikada YouTube-ka VidToMp3
horeyba lotube laakiin waan lumiyay waa ugu badnaan soo dejinta laakiin mar dambe ma soo dejisan karo
ciise ciise dijo
Waxaan rabaa inaan ka soo dejiyo muusikada YouTube
Ku jawaab jesusrojas
Soo Degso. music ka youtube
waa wax aad u fudud oo si fiican loo sharaxay
Ku jawaab brigido